Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Jaaliyadda DDS oo bogaadisey socdaalka Sama-Wade ee Madaxweyne CMC
Jaaliyadda DDS oo bogaadisey socdaalka Sama-Wade ee Madaxweyne CMC
March 17, 2013 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Anagoo kuhadlayna magaca bulshaweynta Jaaliyadda Somaliyeed ee Kililka 5, reer United kingdom, America iyo Europe gaarahaan degaanka weqooyiga kilika 5 waxaan halkan hambalyo iyo salaan diiran ugu gudbinaynaa waftiga uu Madaxweynaha kilika 5 Cabdi Maxamed Cumar hoogaaminayo ee hada kusugan deeganka waqooyi galbeed ee ismaamulka Soomaalida. Waxaan tageero buuxda lagarab taagannahay socdaalka madaxweynaha ee lamagac baxay “Same Wadde”. Allah hakadhigo mid samowade ah!
Hadii dibloo yare jaleeco taarikhda dheer ee dawladda degaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya lamahayo Madaxweyne sidan oo kale kusoo gaala-baxay socdaaldheer degaankan uuhada socdaalka “Same Wadde” ku joogo Madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar. Waa markii ugu horeysay ay dadka deeganka waaqooyi galbeed isha saaraan Maxweyne kalsooni buuxda hawlo dawladeed kudhexmara degaankan. Hadaanu nahay Jaaliyadda degaanka ee kunool waddama reer galbeedka waxaanu mahadnaq, qalbi furan iyo caleemo qoyan kusoo dhaweynaynaa go’aanka uu waftiga madaxweynuhu ku hogaaminaayo ee loogu kuurgalaayo baahida degaanka.
Waxaanu kaloo halkan hambalyo iyo boogadin udiraynaa dhamaan madaxdhaqmeeyada, waxgaradka iyo bulshoweynta degaanka ee ku hawlan kashaqaynta isusoo dhaweynta dadka rayidka ah ee kudhaqan degaanka. Waxaanu kaloo hambalyo ugudiraynaa sida giimaha leh ee ay uga hawlgaleen soodhaweynta madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar iyo waftiga.
Jaaliyadda Soomaalida kililka 5 , UK, America & Europe